Hindiya:-Maxay ka tiri xaaladda Soomaaliya ee Khilaafka,
Hindiya ayaa ku tilmaamtay “wax laga xumaado” jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan qabsoomida doorashooyinka Soomaaliya waxayna sheegtay in dib u dhacan uu ku dhiira galin doono Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan in ay helaan fursad ayna sii wadaan falalkooda wax u dhimaya guulaha dimoqraadiyada ee ilaa iyo hada la gaaray.
“Maanta, Soomaaliya waxa ay wali wajahaysaa ismari waa siyaasadeed, oo khatar ku ah horumarka laga gaarey sanadihii la soo dhaafay dhanka xasilinta. Caqabada siyaasadeed ee ka taagan qabashada doorashooyinka runtii waa wax laga xumaado” Ayuu yiri Wakiilka Joogtada ah ee Hindiya u fadhiya Qaramada Midoobay TS Tirumurti ka hadlay shirkii Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ee diirada lagu saaray arrimaha Soomaaliya.
Danjiraha ayaa sheegay in ay ka badan tahay shan bilood tan iyo markii la saxiixay heshiiska bishii Sebtember ee sanadkii hore ay gaareen dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka balse aan wali dhaqangalin.
Si kastaba ha noqotee,”si ka duwan wixii aan ka filaynay,” shirkii u dhexeeyay hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ayaa qorshuhu ahaa markii hore 15-kii Febraayo ka dibna Febraayo 18-19 ma uusan dhicin” ayaa laga soo xigtay Wakiilka Joogta ah ee Hindiya u dhafiya UN-ka.
Isaga oo carabka ku adkeeyay in ay muhiim tahay in hogaamiyaasha Soomaalida ay galaan wada hadal wax ku ool ah si loo xaliyo dhib u dhaca doorashada, Mr Tirumurti wuxuu yiri “hada waxaan fileynaa go’aan hore oo hogaamiyaasha ay ka gaaraan qabsoomida doorashooyinka dhowaan” isaga oo intaasi ku daray in ay muhiim tahay qabsoomida doorashada iyo qodobadii lagu heshiiyay 17 September 2020.
Danjiraha ayaa sheegay in New Delhi ay soo dhaweyneyso ku dhawaaqistii Febraayo 16-keedii in Gudiga Farsamada ee matalaya Dowlada Federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowlada Federaalka ay ogaadeen xalalka arimaha doorashooyinka ee harsan iyo in loo gudbiyay Golaha Wadatashiga Qaranka.
“Shaki badan kuma jiro in waqtiga ay qaadaneyso in la qabto doorashada, ay xaalada sii murganaan doonto. Dib u dhaca wuxuu kaliya ku dhiiranayaa Al-shabaab iyo kooxaha kale ee hubeysan si ay u helaan dhul badan oo ay u sii wadaan falalkooda argagaxiso ee fog” ayuu yiri Mr Tirumurti asaga oo carabka ku adkeeyay in Hindiya ay ku boorineyso dhamaan Soomaalida in aysan wax rabshado ah sameynin inta lagu gudajiro kala guurkaan muhiimka ah ayna taa badalkeeda dhiirigeliso wadahadal iyo dib uheshiisiin.
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa golaha ugu sheegey khadka tooska ah ee fiidiyowga in is-maandhaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan hoggaamiyeyaasha muhiimka ah ee Soomaaliya uu hor istaagey dhaqan-gelinta hannaanka doorasho ee ay ku heshiiyeen Hogaamiyaha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo hoggaamiyeyaasha Dowlad-goboleedyada xubnaha ka ah Federaalka Sebtember 17, 2020.
“Qaabkan waxaa si rasmi ah u ansixiyay labada aqal ee baarlamaanka waxaana taageeray dhamaan qeybaha kale ee siyaasada ugu waa weyn, laakiin dhaqan galinta ayaa muran ka taagan yahay” ayuu yiri James Swan.
James Swan wuxuu intaa ku daray in xiisadaha ka dhasha hirgelinta doorashada ay hada ku soo biireen su’aalo ay soo bandhigeen qaar ka mid ah dadka siyaasada ka faalooda ee ku saabsan sharci ahaanshaha xilka madaxweynenimo Mohamed Abdullahi Mohamed ‘ka dib markii uu dhamaaday waqtigiisii dastuuriga ahaa 8 February.
Mr Tirumurti wuxuu walaac ka muujiyay inta badan weerarada ay geysteen Al-shabaab bilihii la soo dhaafay wuxuuna sheegay in qaraxii ismiidaaminta ahaa ee isbuucii la soo dhaafay ka dhacay Muqdisho ay ka tarjumeyso xaalada amni ee dalka.
Isaga oo si adag u cambaareynaya weerarada ay gaystaan Al Shabaab, Mr Tirumurti wuxuu sheegay in Hindiya ay sidoo kale ka walaacsan tahay isticmaalka sii kordhaya ee waxyaabaha qarxa ee Al-Shabaab wuxuuna ku baaqay in taageero loo fidiyo Ciidamada Amniga ee Soomaaliya si loo dhiso awoodooda si ay wax uga qabtaan khatartaas.
Hindiya waxa ay sidoo kale ka dhawaajisay in ay aad uga walaacsan tahay xaaladda bani’aadamnimo ee ka sii dareysa ee Soomaaliya, maadaama iskahorimaadyada joogtada ah iyo xasillooni darrada dhaqaale ay ugu darsameen halista saddexda ah ee kala ah COVID-19, Ayaxa iyo daadadka.
Mr Tirumurti wuxuu sheegay in ay tahay “wax laga xumaado” in shaqaalaha samafalka ee ku shaqeeya duruufaha adag ay bartilmaameedsadaan Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xiriirka la leh Daacish iyo Al qaacida.
“Helitaanka shaqaalaha samafalka ayaa weli muhiim u ah yareynta caqabadaha soo food saaray dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa muhiim ah in laga caawiyo Soomaaliya la dagaalanka Ayaxa ku faafaya gobolkaas ilaa qaybo badan oo Aasiya ah, kaasoo sababaya waxyeello ballaaran oo gaarta dalagyada. Waa in beesha caalamku ay siiso ahmiyad gaar ah, ”ayuu yiri.
Danjiraha ayaa hoosta ka xariiqay in xaaladda Soomaaliya ay dirayso fariin ah in xiriir joogto ah lala yeesho Dowladda Federaalka iyo Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka si guud ahaanba wax looga qabto dhibaatooyinka badan ee dhinacyada siyaasadda, amniga, iyo arrimaha bani’aadamnimada loogana warqabo xaaladda dalkaan dhaca geeska qaarada Afrika.
Isagoo xusay in howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ay door muhiim ah ka ciyaarayeen sidii Al-Shabaab looga saari lahaa Soomaaliya dhowr sano la soo dhaafay ilaa iyo hada, danjiraha ayaa sheegay in ciidamada amniga Soomaaliya iyo hay’adaha Dowladda ay u baahan yihiin taageero joogto ah si wax looga qabto Al Shabaab iyo kooxaha kale ee hubeysan.mas’uuliyadaha amniga ee AMISOM ilaa ciidamada amniga Soomaaliya waa in si taxaddar leh loo waafajiyaa, iyadoo maanka lagu hayo xaqiiqooyinka dhabta ah ee jira.
Mr Tirumurti wuxuu ka digay “ka bixitaan deg deg ah in ay baabi’ineyso” horumarka ilaa iyo hada la gaaray. Wuxuu intaas ku daray in kordhinta waqtiga AMISOM aysan ku koobnaan karin caqabadaha haatan jira ee dhanka dhaqaalaha ah, isagoo intaa ku daray in dib u soo noqoshada farsamada ee amarka AMISOM ay u oggolaaneyso dhamaan daneeyayaasha in ay eegaan dib u qaabeynta AMISOM qaab dhameystiran waqti dambe.
Arrinta burcad badeedda, Mr Tirumurti ayaa yiri “iyadoo dhawaanahan aysan jirin wax weerarro burcad-badeed ah oo lagu guuleystay oo ka dhacay xeebta Soomaaliya, haddana halistu way sii jirtaa”
Ciidamada Badda ee Hindiya waxay kormeero ka dhan ah burcad badeedda ka wadeen Gacanka Cadmeed iyo xeebaha Soomaaliya si isdaba joog ah tan iyo bishii Oktoobar 2008 waxayna xiriirinayeen la-hawlgalayaasha dalal badan si ay gacan uga geystaan amniga badaha iyo nabadgelyada dhammaan gobolka, ayuu hadalkiisa ku soo xiray.